Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Shir Caalami Ah Kaga Qayb Galay Hague | Haldoor News
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Shir Caalami Ah Kaga Qayb Galay Hague
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Wasiirka Caddaaladda ee Argentina
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Aadan Xaaji Cali Axmed, ayaa kaga qaybgalay dalka Holland, magaaladda The Hague, shirar caalami ah oo lagaga hadlay garsoorka iyo heliddda caddaaladda. Gudoomiyaha oo hogaaminayay wefti reer Somaliland ah oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah wuxuu 7da February ka qaybgalay shir ay iskugu yimaadeen ku dhowaad 200 qof oo ka kala yimi aduunka oo dhan. Dadka ka soo qaybgalay waxay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihin Holland, Norway, Ingiriiska, Kuuriya, Maraykan, Argatiin, Baraasiil, Kiiniya, Gaana iyo dalal badan oo kale.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare iyo wasiirka caddaaladda ee Gambia
Shirka waxa furtay Sigrid Kaag oo ah wasiirka ganacsiga debedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Holland. Waxa sidoo kale ka soo qaybgalay wasiirarada caddalaadda ee dalal ay ka mid yihiin Argentina, Serie Leone, Holland, Gambia iyo dalal kale. Waxa kaloo shirka ka soo qaybgalay garsoorayaal, ururo caalami ah iyo qaramada midoobay iyo madax waynayaal hore. Waxa shirka marti gelisay wasaaradda arimaha debedda ee dalka Holland.
Sigrid Kaag oo ah wasiirka ganacsiga debedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Holland
8da February 2019 wuxuu gudoomiyuhu ka qayb galay shir kale oo u gaar ah Somaliland. Shirkan oo lagu faqiiday arimaha garsoorka iyo helidda caddaaladda Somaliland, qorshaha dib u habaynta garsoorka iyo hawlaha ay ku foogan yihiin ururada bulshada rayidka. Shirka waxa soo wadaa qaban qaabiyay Knowldage Platform Security and Rule of Law, Safer World iyo Xarunta Xuquuqal Insaanka ee Somaliland.
Gudoomiyuhu wuxuu la kulmay wufuudii kala duwanayd ee shirarka ka soo qaybgashay isaga oo la wadaagay guulaha ay Somaliland gaadhay iyo qorshayaasha u yaal si loo rumayn laha guulo dheeraad.
Dadkii gudoomiyuhu la kulmay waxaay aad ugu riyaaqeen arimaha horumarinta garsoorka ee socda. Weftiga waxaay kaga qaybgaleen shirka Somaliland ahaan.
Weftigu waxaay boqdeen maxkamadda caalamiga ah ee u qaabilsan qaadista dacwadaha dembiyada dagaal ee dalalka Rwanda iyo Yuguslaafiya. Waxay halkaas kula kulmeen madaxda maxkamadda oo uu ka mid yahay dacwad oogaha guud iyo saraakiisha sharci.
Weftiga uu hogaaminayay Gudoomiyuhu waxa ka mid ahaa Guleid Ahmed Jama, gudoomiyihii hore ee Xarunta Xuquuqal Insaanka, iyo Cabdijaliil Daahir Af qarshe oo ka tirsan Safer World.